Nhau - Amazons Furniture Yemhando Waranti
Welcome to Website yedu.
Amazons Furniture Yemhando Waranti
3 Makore Kuvhara
Mushure mekutengesa masevhisi & Mari Kudzoserwa Guarantee
Ndokumbira utarise: garandi haifukidze kukuvara kwemaune nemaune, hunyoro hwakanyanya, kana kukuvara kwemaune.
* Pamusoro pezvo, isu zvakare tinovimbisa zvese zvigadzirwa zvedu kuti zvichange zvichishanda kana iwe uchizvitambira kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira. Kugutsikana kwako kwakakosha kwatiri, saka kana chigadzirwa chako chiri DOA (Vakafa Pakusvika), tizivise, uye tidzorere kwatiri mukati memazuva makumi matatu kubva pazuva rawatenga. Isu tinotumira wekutsiva kwauri kana tichinge tagamuchira chinhu chako chakadzoserwa (Mari dzinosanganisirwa nekudzosa zvinhu hazvidzoswe. Tichabhadhara mari inowanikwa mukutumira iyo yekutsiva).
* Waranti ichave isina kana zvigadzirwa zvikashandiswa zvisirizvo, zvisina kubatwa zvakanaka, kana kugadziridzwa chero nenzira.
* Kudzoreredza fizi kunogona kuitirwa muzviitiko zvekudzoreredzwa nekuda kwekuchinja kwepfungwa. Kune Vatengi vepasi rese chete
* Kunze kwemitero, mitero, uye muripo hazvibatanidzwe mumutengo wechinhu kana mutengo wekutumira. Mhosva idzi ibasa remutengi. * Ndokumbira utarise nehofisi yenyika yako inoona nezvetsika kuti uone kuti ndedzipi mari dzekuwedzera dzichave pamberi pekubhidha kana kutenga.
Kugadzirisa uye Kubata mhosva pazvinhu zvekudzosa ibasa remutengi. Mari yekudzorera inozopihwa nekukurumidza sezvazvinogona kuita uye mutengi achapihwa ziviso yeemail. Kudzorera kunongoshanda chete kumubhadharo wechinhu Disiki
Kana iwe uchifadzwa nekutenga kwako, ndapota shandisa ruzivo rwako nevamwe vatengi uye tisiye isu mhinduro yakanaka. Kana iwe usina kugutsikana nekutenga kwako munzira ipi neipi, ndapota taura nesu kutanga!
Isu tinofara kukubatsira kugadzirisa chero dambudziko uye kana mamiriro acho achida izvozvo, isu tinopa kudzoreredzwa kana kutsiva.
Isu tinoedza kubatsira vatengi vedu kugadzirisa chero dambudziko mukati memiganhu inonzwisisika.
Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, isu tingave tichigamuchira zvikumbiro zvewarandi
Post nguva: Sep-15-2020
Kunzwa mushure mekushanyira Lanfang furnit ...
Izwi rakakosha reAmazons fenicha ndiR ...
Kwete. 300 Yuanfeng Street, Shengcheng Subdistrict, Shouguang, Weifang, ShanDong Province, China
Tidaidze Iye Zvino: 008613792661055